XASUUSIN: Dhacdooyinkii ugu waa weynaa ee ka dhacay Sannadkan Somalia & Caalamka maxaad ka xasuusataa? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
XASUUSIN: Dhacdooyinkii ugu waa weynaa ee ka dhacay Sannadkan Somalia & Caalamka maxaad ka xasuusataa?
Jan 1, 2017 - jawaab	Waxaa Qoray: Mohamed Yusuf Yasin on January 1, 2017.on January 14, 2017.
MUQDISHO(P-TIMES)- Sannadkii galbaday ee 2016-ka waxyaabo badan ayaa ka dacay Caalamka aanu ku nool-nahay, si gaar ah Isbedeladan waxay uga dhaceen dunida Islaamka iyo wadamada Reer galbeedka, Sidaas oo kale Soomaaliyana arrimo waa weyn oo dhanka Amaanka iyo Horumarka ah ayaa ka dhacay.
Dagaalka Siiriya oo sii socday, Ruushka oo lug buuxda ku yeeshay, Dilkii Safiir Ruush ah, waxay intaasi ahaayeen kuwa ka cusubaa dalka Siiriya, waxaana uu sannadkan ku dhamaaday, iyadoo 96% dalka Siiriya ay dib u hanteen ciidamada dawladda Bashaar Asad uu hogaamiyo.
Turkiga dhacdooyinkii xiisaha lahaa ee Caalamka gilgilay waxaa kamid ahaa Afgambigii ay Shacabka dalkaas ka hortageen, Xabsiyada ayaa buuxa hadda in ka badan 20,000 kun oo qof ayaa xira, waxay sugayaan xukuno ay kamid yihiin dilal lagu fuliyo.
Africa Isbedelo dhanka Doorashooyinka oo waa weyn kama dhicin marka laga reebo Burundi oo sii holcaysa, Addis Ababa oo xaalad deg deg ah ku soo rogtay dalka Itoobiya, Congo oo ay wali ka jiraan isku dhacyada hubeysan ee dhanka Kheyraadka la xariira, Gambia oo uu Madaxweyne wali isku dhajinayo kursiga iyo Soomaaliya iyo Kenya oo Maxkamad isla tagay.
Mareykanka waxaa ka dhacay lama arag iyo Lama maqal, Donald Trump oo aan loo fileyn Madaxweyne-nimada Mareykanka ayaa ku soo baxay, tanni taariikhda dunida ayay saameyn ku yeelatay, wali xilka lama wareegin Trump, laakiin sheekooyinka laga dharansan yahay ayaa ah in uu yahay nin raba Hindisayaal gaar ah in uu fuliyo.
Soomaaliya marka si gaar ah loo fiiriyo Isbedelo siyaasadeed ayaa lafilayay in ay dhacaan September 2016, laakiin guuldarrooyin ayaa hareeyey, kuwaas oo keenay in aan ilaa hadda la dooran Madaxda dawladda Faderaalka ee awooda kala wareegaysa Madaxdii mudadoodu dhamaatay waqtiga hore.
Dagaalada lagula jiro Al- Shabaab ayaa sii xoogeystay sannadkii lasoo dhaafay, waxayna gaarsiiyeen Al- Shabaab meelo cusub iyagoo bilowgii sannadkan ku duulay mandiqada Puntland, laakiin dagaalkaas wuxuu noqday mid taariikhda galay.
Kooxda la baxday dawladda Islaamiga ah ee DAACISH waxay markii ugu horeysay awoodeeda ku soo bandhigtay gudaha Soomaaliya, degmada Qandala ee Puntland ayay qabsatay oo ay haystay in ka badan 37 maalmood, laakiin ugu dambeyntii Puntland ayaa dib ula wareegtay.
XASUUSTAADA MAXAA UGU WEYNAA DHACDADAN HOOS KU DHIIBO